အကြောင်း - Twesix စွမ်းအင် Co. ,, Ltd မှ
Twesix စွမ်းအင် Co. , Ltd မှ
Twesix စွမ်းအင် Co. , Ltd မှ. Shortcut“ TWESIX”, အပူစုပ်စက်ခြောက်စက်များကိုလူသိများသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်. အဆိုပါကုမ္ပဏီ R ကိုအာရုံစိုက်&: D, ထုတ်လုပ်မှု, အပူစုပ်စက်ခြောက်ခြောက်ထုတ်ကုန်များရောင်းချခြင်းနှင့်ပြီးနောက် - ရောင်းချခြင်း, နှင့်ပြည့်စုံခြောက်သွေ့တဲ့ဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်. အစိမ်းရောင်အသစ်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီအဖြစ်, ၎င်းသည်“ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အပူစုပ်စက်ခြောက်စက်ကိုသာထုတ်လုပ်ရန်” ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်။.
တရုတ်၌, ၎င်းသည်အပူစုပ်စက်ခြောက်စက်များထုတ်လုပ်သည့်စနစ်တစ်ခုလုံးရှိသည်, ထို့အပြင်အပူလဲလှယ်ခြင်းနှင့်စာရွက်သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများ, တစ်စက်ရုံareaရိယာနှင့်အတူ 30,000 စတုရန်းမီတာ. စုပ်ယူခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံခြင်းသည်ဒီဇိုင်း၏သဘောတရားများဖြစ်သည်. ကျွန်ုပ်တို့၏လူတန်းစားအားလုံး၏အပူစုပ်စက်ခြောက်စက်မှအကျိုးကျေးဇူးရရှိစေရန်အာရုံစူးစိုက်ခြင်း, ၎င်းသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဟုအမည်တပ်ထားသော sexy ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်လာလိမ့်မည်, ဖန်တီးမှု, ကိုယ်ပိုင်”.
TWESIX သည်အပူစုပ်စက်ခြောက်ခြင်းနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအလေးထားသည်, အားဖြင့်ပြtheနာများကိုဖြေရှင်းရန်. ယခုဖြစ်ရန်, သစ်သားကိစ္စတော်တော်များများမှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခဲ့တယ်, မှို, အစေ့, ဆေးရွက်ကြီး, ပြောင်းလဲနေသောခြောက်သွေ့ခြင်း, စသည်တို့.
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်အာမခံပါသည် 12 months.We သည် OEM အမှာစာများယူနိုင်ပါသည်. သုံးစွဲသူများသည်ဒီဇိုင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ပုံဆွဲသကဲ့သို့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်.
ငါတို့သည်လည်း client များအဖြစ်ဒီဇိုင်းနိုင်ပါတယ်’ လိုအပ်ချက်များ. ကျွန်ုပ်တို့၏စံထုတ်ကုန်များ MHTA ကဲ့သို့, GA နှင့် GB စီးရီးအချိန်မရွေးစတော့ရှယ်ယာ၌ရှိကြ၏.
Room702 # 3, Bigui ယွမ်, Ronggui မြို့, Shunde ခရိုင်, Foshan စီးတီး,တရုတ်နိုင်ငံ
မူပိုင် © ရေ heat exchanger များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ရေးအာရုံစိုက်, condenser, shell ကိုနှင့်ပြွန် heat exchanger, ရေ heat exchanger ရေ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး.